Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguMila
Amagumbi am amatsha kraca kwaye abekwe kumgangatho we-2 wesakhiwo eNew Bhubaneswar kwindawo ye-Infocity yentengiso. Isakhiwo sikuma-10 eenyawo ukusuka kwiinyawo ezingama-200 kuhola wendlela enika ukufikelela lula kwipropathi. Umnini weNdlu uhlala kumgangatho we-1 oqinisekisa ukufumaneka lula komninimzi xa kukho nayiphi na imfuneko .Indlu iphakathi kwidolophu eyaziwayo yetempile yaseBhubaneswar ene-International Air port kwaye iyinkunzi yephondo lase-Odisha eMpuma India. .
Indawo yam inokuba yiyo KUPHELA apha , kwindlela ye-200 ft ephakathi kweBhubaneswar kodwa malunga ne-20 mts ukuya kwi-Airport kunye ne-15 mts kwisikhululo sikaloliwe. Umntu unokutyelela ngokulandelayo ngelixa ehlala kule propati. EBhubaneswar- Nandan Kanan Zoo, Khandagiri-Udayagiri (Budha & Jain Caves), Itempile yaseLingaraj (enye yeyona tempile inde yeShiva eIndiya), uninzi lwezinye itempile, iMyuziyam yeSizwe, imyuziyam yesizwe, iDhauli yoxolo pagoda, iKalinga International Hockey Stadium njl. Omnye unokundwendwela iPuri, iKonark njl
Indlu iseKanan vihar, isigaba-1, esithetha ikoloni yamahlathi. Lo mmandla unemithi emininzi emikhulu enika ikhava entle eluhlaza .Le ndawo inepaki entle , iibha ezininzi kunye neRestauranti ekufutshane kakhulu .
2. Sinamagumbi ayi-6 ewonke ( BANHARA 1 -6 ) kwi-Airbnb Bhubaneswar (okanye ngokuthe ngqo unokubuzwa emva kokuqinisekiswa kwegumbi ) , ngalinye kubantu be-2 , ngoko oku kunokuhlolwa ukuba kukho imfuneko
Ndifumaneka ngokubanzi xa iiNdwendwe zifika nanini na zindifuna . Banokunditsalela umnxeba qho xa bendifuna